WordPress अद्भुत इन्स्टाग्राम विजेट प्लगइन्स WordPress को लागि - कम्युनल समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B5B बजार समाचार
16 सक्छ, 2021 13 सक्छ, 2021 डेजी स्मिथ अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
तपाईंको वर्डप्रेस वेबसाइटमा इन्स्टाग्राम फिड प्रदर्शन गरेर, तपाईं आफ्ना फलोअरहरू बढाउन र तपाईंको सोशल मिडिया उपस्थिति बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ।
सामाजिक मिडिया एग्रीगेटर तपाईको WordPress वेबसाइटको लागि सबै भन्दा लोकप्रिय र अचम्मको प्लगइन हो।
InstaLink एक प्रीमियम प्लगइन हो जुन मार्केटरहरू बीच धेरै लोकप्रिय छ।
अर्कोतर्फ, वर्डप्रेसले लोकप्रियतामा पोल स्थिति राख्छ मानिसहरूलाई उनीहरूको वेबसाइट निर्माण गर्न प्रदान गर्न। यी दुई दिग्गज बीच तालिका अद्भुत परिणाम प्रदान गर्न सक्दछ। मार्केटरहरूले इन्स्टाग्राम विजेटको नाम अन्तर्गत एक उत्कृष्ट उपकरण फेला पारे जुन उनीहरूको लागि चमत्कारहरू गर्दैछ।
इन्स्टाग्राम जर्नल एक WordPress र सबैभन्दा शक्तिशाली प्लगइन हो।
WordPress धेरै यस्तो प्रदान गर्दछ इन्स्टाग्राम विजेट प्लगइन्स जसले तपाइँको WordPress लाई तपाइँको इन्स्टाग्राम जडान गर्न मद्दत गर्दछ। यी प्लगइनहरूले तपाईंको ग्राहकलाई बढि ग्राहकहरू लिन र तपाईंको बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ।
यस ब्लगमा, हामी WordPress for का लागि भयानक इन्स्टाग्राम विजेट प्लगइनहरू छलफल गर्दैछौं जुन तपाईंको व्यवसायलाई अर्को तहमा लैजान र तपाईंको ब्रान्ड सचेतना बढाउन सक्दछन्।
तर यी प्लगइनहरूको बारेमा जान्नु अघि, हामी बुझौं कि किन ईन्स्टाग्रामले व्यवसायको लागि यत्तिको महत्त्व राख्छ।
तपाइँको WordPress वेबसाइटमा किन इन्स्टाग्राम फिड प्रदर्शन गर्नुहुन्छ?
इन्स्टाग्रामसँग दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने उत्कृष्ट सुविधा छ। दृश्य सामग्रीले अधिक प्रभाव सिर्जना गर्दछ र लिखित वा पाठ सामग्रीको तुलनामा बढी दर्शकहरू लिन्छ।
सामाजिक मिडिया निम्न र अन्तर्क्रिया एक ब्रान्डको प्रतिष्ठा थाहा छ र यो डिजिटल युग मा पुग्न उपायहरु हुन्। तपाईंको वर्डप्रेस वेबसाइटमा इन्स्टाग्राम फिड प्रदर्शन गरेर, तपाईं आफ्ना फलोअरहरू बढाउन र तपाईंको सोशल मिडिया उपस्थिति बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ।
सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मले ब्रान्डहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूसँगको अन्तर्क्रिया बढाउन र उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको इन्स्टाग्राम फिड प्रदर्शन गरेर, तपाइँ तपाइँको ट्राफिकलाई तपाइँको सामाजिक मिडिया पृष्ठमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको कुराकानी र अनुयायीहरूसँग अन्तर्क्रिया बढाउन सक्नुहुन्छ।
फिडले तपाइँको नयाँ ग्राहकहरुलाई सामाजिक प्रमाण पनि प्रदान गर्दछ, एक नयाँ ग्राहक जहिले सामाजिक प्रमाण खोज्छ र कुनै उत्पादन किन्न अघि समीक्षा बारे पढ्छ। विजेटले तपाईंलाई उत्पादन र व्यवसायको बारेमा आवश्यक जानकारी र प्रमाण प्रदर्शन गरेर ग्राहकहरूको विश्वास जित्न मद्दत गर्दछ।
सर्वश्रेष्ठ वर्डप्रेस इन्स्टाग्राम विजेट प्लगइनहरू
१. सोशल मीडिया एकत्रीकरणकर्ता
सामाजिक मिडिया एग्रीगेटर तपाईको WordPress वेबसाइटको लागि सबै भन्दा लोकप्रिय र अचम्मको प्लगइन हो। टागेम्बेड प्लगइन प्रदान गर्दछ। यसले तपाइँलाई ल्याउन, क्युरेट गर्न, र तपाइँको इन्स्टाग्राम फिडलाई अनुकूलन गर्न र तपाइँको वेबसाइटमा एक एकीकृत प्रस्तुतीकरणको रूपमा प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको वेबसाइटलाई अधिक आकर्षक र आगन्तुकहरूका लागि अन्तर्क्रियात्मक बनाउँदछ।
यसले तपाईंलाई तपाईंको विजेट अनुकूलित गर्न पनि अनुमति दिन्छ; तपाईं विभिन्न फन्ट शैलीहरू, फन्ट आकारहरू, र colors्ग, र पृष्ठभूमिबाट तपाईंको विजेटलाई अझ आकर्षक र तपाईंको वेबसाइट आँखा मनपर्दो बनाउन को लागी चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं विभिन्न लेआउटबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको कलात्मक शैली प्रदर्शन गर्नुहोस्, वा केवल तपाईंको शैली र वेबसाइट अनुरूप लेआउट चयन गर्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा सामग्री प्रदर्शन मा एक नजर राख्न सक्नुहुन्छ; तपाईं सबै अनावश्यक पोष्टहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र फिडलाई तपाईंको व्यावसायमा सान्दर्भिक राख्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक मिडिया एग्रीगेटरले ह्याशट्याग, ट्यागहरू, उल्लेख, स्थानहरू, आदि प्रयोग गरेर पोष्टहरू ल्याउँदछ यसैले तपाईं पर्याप्त सामग्री स collect्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वेबसाइटमा चयनित पोष्टहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
InstaLink एक प्रीमियम प्लगइन हो जुन मार्केटरहरू बीच धेरै लोकप्रिय छ। विजेट प्रयोगकर्तानाम, ह्यासट्याग, आदि प्रयोग गरेर इन्स्टाग्रामबाट सामग्री सlects्कलन गर्दछ, र तपाईंको WordPress वेबसाइटमा फिड प्रदर्शन गर्दछ।
InstaLink तपाइँको फिड को लागी एक उत्तरदायी डिजाइन प्रदान गर्दछ जुन तपाइँको फिड को स्वच्छ र आकर्षक राख्दछ। प्लगइनसँग प्रयोगकर्ता-अनुकूल ईन्टरफेस छ र सबै आकारहरूमा अनुकूलन गर्दछ। प्लगइन सबै उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ, र यसैले तपाईं यो विभिन्न उपकरणहरूसँग उपयुक्त बनाउन प्लगइन परिवर्तनको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
यसले तपाईलाई तस्वीर र विभिन्न आकारका पोष्टहरू प्रदर्शन गर्न सजिलो प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंको वेबसाइटमा आकर्षण थप गर्दछ।
3। इन्स्टाग्राम जर्नल
इन्स्टाग्राम जर्नल एक WordPress र सबैभन्दा शक्तिशाली प्लगइन हो। यो रमाईलो छ र तपाइँको वेबसाइट मा सुन्दरता थप गर्दछ। यसले तपाईंको इन्स्टाग्राम खाताबाट सामग्री सlects्कलन गर्दछ र तपाईंको वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्दछ। यसले आगन्तुकहरूलाई तपाईंको इन्स्टाग्राम च्याटमा नक्कल गर्न र तपाईंको इन्स्टाग्राम निम्न वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ।
प्लगइनले तपाईंलाई अनुकूलन विकल्पहरूको उनीहरूको विस्तृत दायराबाट छनौट गर्न अनुमति दिन्छ; तपाइँ उपयुक्त लेआउट र उपयुक्त शैली चयन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको वेबसाइट सुरुचिपूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ।
4। इन्स्टाग्राम फीड WD
इन्स्टाग्राम फिड डब्ल्यूडी एक शानदार प्लगइन हो जसले तपाईंलाई वेबसाइटमा तपाईंको इन्स्टाग्राम फिड सुन्दर र सुन्दर ढंगले प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
इन्स्टाग्राम तपाईंको व्यवसायको प्रचार गर्नको लागि एक अद्भुत सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो।
यो स्थापना गर्न धेरै र प्रयोग गर्न सजिलो छ। प्लगइनको ब्याकएन्ड प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ, र त्यसैले तपाईं यसको कामको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
यो फ्रि प्लगइन कोडिंग गर्दैछ, त्यसैले तपाईंलाई कुनै पनि विगतको अनुभव र कोडिंगको बारेमा ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। प्लगइनको अर्को अचम्मको सुविधा यो हो कि यो मोबाइल, ट्याब्लेटहरू, डेस्कटपहरू, र कुनै पनि अन्य उपकरणसँग उपयुक्त छ।
यसले प्रदर्शन गर्नको लागि डाटाको ठूलो सेट प्रदान गर्दछ, र यसैले ग्राहकहरू लामो अवधिसम्म व्यस्त रहन सक्दछन् र सामग्रीको लागि गहिरो स्क्रोल गर्नुहोस्।
5। WordPress सामाजिक बोर्ड
सामाजिक मिडियासँग विशाल परिदृश्य छ, र धेरै प्लेटफर्महरू व्यापारहरूलाई बढाउन र नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। WordPress सोशल बोर्डले तपाईंलाई विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मबाट फीडहरू जडान गर्न र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखलाको साथ, तपाईले भ्रमण गर्नेहरूलाई तपाईंको व्यवसायको लागि पर्याप्त संलग्नता र अन्तर्क्रिया प्रदान गर्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि उपयुक्त लेआउट छनौट गरेर पनि तपाईंको विजेट अपील गर्न सक्नुहुनेछ। प्लगइनले तपाईंको विजेट अनुकूलित गर्नका लागि पर्याप्त विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँ तपाइँको आगन्तुकहरु मा एक महान छाप बनाउन र तपाइँको ग्राहक मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्लगइनको आश्चर्यजनक सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले असीमित स्क्रोलि options विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यो हुन्छ कि आगन्तुकहरू तपाईंको फिडमा धेरै सामग्रीहरूमा हेर्न सक्छन् जुन उसले चाहान्छ। प्लगइनसँग आधुनिक र उत्तरदायी डिजाइन छ; त्यस्ता सुविधाहरूले यसलाई बजारमा एक उत्तम प्लगइनहरू बनाउँदछ।
इन्स्टाग्राम तपाईंको व्यवसायको प्रचार गर्नको लागि एक अद्भुत सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो। यो तपाइँको व्यवसाय को लागी एक महान पहुँच प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई अधिक ग्राहकहरु लाई जम्मा गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाइँको वेबसाइटमा इन्स्टाग्राम फिड इम्बेड गरेर, तपाइँ तपाइँको बिक्री वृद्धि गर्न र तपाइँको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्नुहुन्छ।
माथि उल्लेखित उपकरणहरू उत्तम उपकरणहरू हुन् जुन बजारमा उपलब्ध छन्, यी उपकरणहरू प्रयोग गरेर अघि बढ्नुहोस् र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई माथि उठाउनुहोस्।
सांप्रदायिक समाचार इन्स्टाग्राम विजेट